၁။ သုံးစွဲသည့် အကောင့်များ
၂။ သင်ခန်းစာများလေ့လာခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခြင်း
၃။ သင်တန်းကြေးပေးချေမှုနှင့် Refund ပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်း
၄။ Waso Learn ၏အခွင့်အရေးများ
၅။ သတ်မှတ်ချက်များကို ပြင်ဆင်ခြင်း
Waso Learn Mobile Applications မှကြိုဆိုပါသည်။
Waso Learn Mobile Application များမှ ပေးအပ်လျက်ရှိသော သင်ခန်းစာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများသည် Strategy First Education Group Ltd. ၏ လက်အောက်ခံဖြစ်သော Waso Full Moon Company Limited (Company Registration – 113533323) မှ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့၏ Platform နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ကျောင်းသား/သူများနှင့် ဆရာ၊ ဆရာမ များအားလုံး အသုံးပြုနေသောအချိန်တွင် လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိစေရန်အတွက် စည်းကမ်းများကို ချမှတ်ထားပါသည်။ ဤစည်းကမ်းချက်များသည် Waso Learn ၏ Website, Waso Learn Mobile Applications (iOS/Android), API များ နှင့်အခြားသက်ဆိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှု အားလုံး၏ အသုံးပြုမှုအပေါ်တွင် သက်ရောက်မှုရှိမည်ဖြစ်သည်။
Waso Learn ကို အသုံးပြုရန်နှင့် သင်ခန်းစာများသင်ယူရန်အတွက် အကောင့်တစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ သင့်အကောင့်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များအားလုံးသည် သင့်တာဝန်ဖြစ်သောကြောင့် သင့်အကောင့် Password ကို လုံခြုံသည့်နေရာတွင် သိမ်းထားသင့်ပါသည်။
သင့်အကောင့်ကို တခြား တစ်စုံတစ်‌ယောက်က ဝင်ရောက်အသုံးပြုနေသည်ဟု သံသယရှိပါက ကျွန်တော်တို့၏ Support Team ကို ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားနိုင်ပါသည်။
အကောင့်ဖွင့်လှစ်ရာတွင် အချက်အလက်များ၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ လိပ်စာများ အားလုံးကို မှန်ကန်စွာဖြည့်သွင်း ပေးရပါမည်။
သင့်အကောင့်အား အခြားတစ်စုံတစ်ယောက်ကို အသုံးပြုခွင့်ပေးပြီး ထိခိုက် နစ်နာစေမှုများ ဖြစ်ပေါ် လာပါက သင်၏တာဝန်သာဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် သင့်အကောင့် Password ကိုအထူးဂရုစိုက်သင့်ပါသည်။ သင့်အကောင့်အား အခြားတစ်ယောက်ကို လွှဲပြောင်းပေးခြင်း၊ အခြားတစ်ယောက်၏ အကောင့်ကို ခွင့်ပြုချက် မရပဲ အသုံးပြုခြင်းမပြုရ။
ကျွန်တော်တို့ထံဆက်သွယ်ပြီး အကောင့်တစ်ခုကို ဝင်ရောက်အသုံးပြုခွင့်တောင်းသည့် အခါတွင်လည်း အကောင့်၏ Login Credentials များကို ဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပါက Login ဝင်ရန် အချက်အလက်များကို မျှဝေပေးမည်မဟုတ်ပါ။ အကောင့်ပိုင်ရှင် ကွယ်လွန်သွားပါက ၎င်းအကောင့်ကို ပိတ်သိမ်း သွားမည်ဖြစ်သည်။
အတန်းအလိုက် ပေးသွင်းထားသော အခကြေးငွေသည် Waso Learn Mobile Application မှ ထိုအတန်းအတွက် သင်ခန်းစာများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာခွင့် လိုင်စင်ကိုရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ သင်တန်းများကို သူတစ်ပါးသို့ လွဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်း၊ ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းများ မပြုလုပ်ရ။
ကျွန်တော်တို့၏ ရုံးတွင် Policy များကြောင့် သင်တန်းကို ရုပ်သိမ်းရန် လိုအပ်သည့် အခြေအနေမှအပ သင့်ကို ကန့်သတ်လိုင်စင်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။
ကျောင်းသားတစ်ယောက်အနေဖြင့် သင်တန်းတစ်ခုကို အခမဲ့ ဖြစ်စေ၊ အခကြေးငွေပေး၍ဖြစ်စေ အပ်နှံသည့် အခါတွင် သင်သည် Waso Learn ၏ Platform/Service များမှ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာခွင့် လိုင်စင်ကို ရရှိခြင်းဖြစ်ပြီး Waso Learn သည် သင်ခန်းစာများ၏ License ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါသည်။ အတန်းများကို ကြည့်ရှုနိုင်ရန် လိုင်စင်ငှားရမ်းခြင်းသာဖြစ်ပြီး အပြီး ရောင်းချလိုက်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
၎င်းလိုင်စင်ဖြင့် မိမိ၏အကောင့် Information ကို တခြားတစ်ယောက်သို့ ပြန်လည် ရောင်းချပြီး ဝေမျှခြင်း၊ တရားမဝင် Download လုပ်ပြီး Torrent Sites တွေမှာ တင်ခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ခွင့် မပေးပါ။ သင်ခန်းစာနှင့် သက်ဆိုင်သော Video များ၊ Pdf file များကို သင်တန်းတက်သူ မဟုတ်သူများသို့ ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရ။
ကျွန်တော်တို့၏ Waso Learn မှ ပေးအပ်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများသည် ကျောင်းသားတစ်ယောက်အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ အခကြေးငွေများ ပေးချေထားသော သင်တန်းများနှင့် သက်ဆိုင်သော သင်ခန်းစာများကို တားမြစ်ချက်များနှင့်အညီ ကြည့်ရှုလေ့လာ ခြင်းများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် Limited, Non-exclusive နှင့် Non-transferable လိုင်စင်ကို ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုရန်၊ ပြန်လည်ရောင်းချရန်မဟုတ်ဘဲ လေ့လာနိုင်ရန်အတွက်သာ ခွင့်ပြုပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။
ထို သင်ခန်းစာများကို အခြားအကြောင်းအရာများအတွက် အသုံးပြုခြင်းကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်သည်။ သင်ခန်းစာများကို အပြည့်အဝဖြစ်စေ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပင်ဖြစ်စေ ပြန်လည်ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ ငှားယူငှားရမ်းခြင်း၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း၊ Derivative Works များဖန်တီးခြင်း၊ လိုင်စင်ခွဲများ ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းစသည့်တို့ကို Waso Learn မှ တာဝန်ရှိ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်ယောက်၏ စာဖြင့် သဘောတူရေးသားထားသော ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ ပြုလုပ်ခွင့် လုံးဝ (လုံးဝ) မရှိပါ။
ဤအချက်သည် ကျွန်တော်တို့၏ မည်သည့် API များမှမဆို Access ပြုလုပ်နိုင်သော သင်ခန်းစာများနှင့် Content များ အားလုံးအပေါ်တွင် သက်ရောက်မှု ရှိသည်။
Waso Learn အနေဖြင့် သင့်ကို အသုံးပြုခွင့်ပေးထားသည့်လိုင်စင်ကို ကျွန်တော်တို့၏ဆုံးဖြတ်ချက် (သို့) Legal/Policy အကြောင်းရင်းကြောင့် သင်ခန်းစာများအားပိတ်ပင်ရမည့် အခြေအနေမျိုးတွင် ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင် သည့် အခွင့်အရေးရှိသည်။
သင်တန်းကြေးပေးသွင်းသည့်အခါတွင် တရားဝင်သည့် ငွေပေးချေခြင်းနည်းလမ်းကို အသုံးပြုရန် သဘောတူ ပါသည်။
အကယ်၍ အပ်နှံထားသော အတန်းကို စိတ်ကျေနပ်မှုမရှိခဲ့ပါက ငွေပေးချေပြီး (၇) ရက်အတွင်း သင်တန်းကြေးကို ပြန်လည်ထုတ်ယူခွင့် (Refund) ကို Waso Learn မှ စီစဉ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
၃.၁ ‌‌ စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်း
Waso Learn မှ အတန်းများ၏ စျေးနှုန်းများကို Waso Learn ၏ Pricing and Promotions Policy ပေါ်တွင် ပါဝင်သည့် အချက်အလက်များကို အခြေခံပြီး ဆုံးဖြတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
တစ်ချို့သောအခြေအနေများတွင် Waso Learn ၏ Website ပေါ်တွင် ရောင်းချထားသော စျေးနှုန်းများသည် Mobile Applications များပေါ်တွင် ရောင်းချသော စျေးများနှင့် ကွဲပြားမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ (Mobile Platform Provider များ၏ စျေးနှုန်းသတ်မှတ်သည့်စနစ်နှင့် ရောင်းအား မြင့်တင်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်သည့် Policy များအရဖြစ်သည်။)
ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် သင်တန်းများကို အထူးနှုန်းထားများဖြင့် အပ်နှံစေခြင်းများကို အခါအားလျော်စွာ လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး တချို့သော သင်တန်းများကို သတ်မှတ်ထားသော အချိန်အတွင်းတွင်သာ အထူးစျေးနှုန်းများဖြင့် ရနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အပ်နှံမည့်အတန်းအတွက် ကျသင့်ငွေပေးချေမှုကို Debit/Credit Card (သို့မဟုတ်) အခြားသော ငွေပေးချေခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများ (KBZ Pay, Wave Money, Mobile Banking) မှ တဆင့် ပြုလုပ်ရပါမည်။
Waso Learn သည် Third Party Payment Processing Partner များနှင့် လက်တွဲပြီး အဆင်ပြေဆုံးစေရန်နှင့် ငွေကြေးအချက်အလက်များ မပေါက်ကြားအောင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ကျသင့်ငွေကို ပေးချေသည့်အခါတွင် သုံး၍မရသော/ခွင့်ပြုချက်မရှိသော ငွေကြေးပေးချေမှုများကို အသုံးပြုနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ ငွေပေးချေခြင်းကို ပြီးမြောက်အောင်မြင်ခြင်းမရှိသော်လည်း သင်တန်းများကို တက်ရောက်ခွင့် ရရှိနေပါက Waso Learn မှ ငွေပေးချေရန် အကြောင်းကြားစာရရှိပြီး ၁၀ ရက်အတွင်း ပေးချေရမည်။ ငွေပေးချေမှုကို မရရှိပါက သင်ခန်းစာများ ဆက်လက်သင်ယူခွင့်ကို Waso Learn မှ ပိတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။
၃.၃ သင်တန်းကြေးပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်း (Refund)
အကယ်၍ အပ်နှံထားသောအတန်းသည် သင့်မျှော်လင့်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိပါက ငွေသွင်းပြီး (၇) ရက်အတွင်း သင်တန်းကြေးကို ပြန်လည်ထုတ်ယူရန် တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ သင်တန်းကြေး ပြန်လည်ထုတ်ယူရာတွင် အတန်း အပ်နှံချိန်တွင် အသုံးပြုထားသည့် နည်းလမ်းပေါ်မူတည်ပြီး Refund ကို စီစဉ်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ အာမခံရက် (၇) ရက်ကျော်သွားသော အတန်းများအတွက် သင်တန်းကြေးများကို ပြန်လည်ထုတ်ယူခွင့် ပြုမည်မဟုတ်ပါ။
Waso Learn ၏ Website မှ လက်ရှိနှင့် အနာဂတ်တွင် လုပ်ဆောင်မည့် Application များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ Logo များ၊ API/Code များနှင့် ဆရာ/ဆရာမများ၊ ဝန်ထမ်းများမှ ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားသော သင်ခန်းစာများအပါအဝင် Waso Learn ၏ Platform နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးသည် Waso Learn ၏ ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုပင်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ အထက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာများကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အသုံးပြုခြင်းများ မပြုလုပ်ရ။
အထက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာများ အားလုံးသည် Waso Learn ၏ မူပိုင်ဖြစ်ပြီး အကျိုးစီးပွားအားလုံးသည် Waso Learn နှင့် သက်ဆိုင်သော Licensor များ၏ သီးသန့်ပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ် ဆက်လက်ကျန်ရှိသွားမည်ဖြစ်သည်။ Waso Learn ၏ Platforms နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများသည် မူပိုင်ခွင့်၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့် အခြားသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေများနှင့် ကာကွယ်မှုများ ပြုလုပ်ထားပါသည်။
Waso Learn ၏ အမည်နှင့် အခြားအမှတ်တံဆိပ် အမှတ်အသားများ၊ Logo များ၊ Domain နာမည်များနှင့် အခြားထင်ရှားသော အမှတ်တံဆိပ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက် များ အားလုံးကို အသုံးပြုခွင့်မရှိပါ။
Waso Learn ၏ သင်ခန်းစာများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် Feedback များ၊ အကြံပေးချက်များကို လွတ်လပ်စွာ ပြုလုပ်နိုင်ပြီး Waso Learn အနေဖြင့်လည်း လိုအပ်သော ပြုပြင်မှုများကို လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ Waso Learn ၏ Platform နှင့် Service များ အသုံးပြုနေချိန်တွင် အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကို လုံးဝ မပြုလုပ်ရ။
• Platform စနစ်များ၏ လုံခြုံရေးအားနည်းချက်များကို ရှာဖွေစမ်းသပ်ခြင်း၊ စနစ်ကို ကျော်လွှားခြင်း၊ ပိတ်ပစ်ခြင်းနှင့် ဝင်ရောက်နှောက်ယှက်ခြင်းများ မပြုလုပ်ရ။
• Waso Learn Platform/Services များပေါ်များမှ နည်းပညာဆိုင်ရာ Source Code နှင့် သင်ခန်းစာများ ကူးယူခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ Derivate Work များဖန်တီးခြင်း၊ Reverse Engineering နှင့် Reverse Assembly ပြုလုပ်၍ ရှာဖွေခြင်း မပြုလုပ်ရ။
• ပြင်ပဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲထားသော၊ လှည့်ဖြားထားသော၊ False-Source Identifying (ဥပမာ - Waso Learn မှ ပေးပို့သော email ကဲ့သို့ ရေးသားထားပြီး) Information များပေးပို့ခြင်း၊ Platform/Services များကို Virus များပို့ခြင်း၊ Overloading၊ Flooding၊ Spamming (သို့မဟုတ်) Mail Bombing စသည့် မလိုအပ်သည့် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများ၊ Waso Learn ၏ အင်တာနက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဝန်ပိစေသည့် နည်းလမ်းများဖြင့် Waso Learn အသုံးပြုသူများကို နှောက်ယှက် ဖျက်စီးခြင်း/ကြိုးစားခြင်းများမပြုလုပ်ရ။
Waso Learn အနေဖြင့် သတ်မှတ်ချက်များကို လိုအပ်ချိန်တွင် လိုသလို ပြောင်းလဲဖြည့်စွက် ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ (ဥပမာ - Features အသစ်များထည့်သွင်းခြင်း)။ သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုခုကို ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ချက်များ ပြုလုပ်ပါက အကောင့်ဖွင့်ထားသော email (သို့မဟုတ်) Waso Learn Service များမှတဆင့် အကြောင်းကြား အသိပေး မည်ဖြစ်သည်။
ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုက်သော သတ်မှတ်ချက်များသည် အခြားသော နေ့စွဲသတ်မှတ်ချက် ပါရှိသည့် ပြောင်းလဲမှုမှ အပ စတင်ထုတ်ပြန်သည့်နေ့မှစတင်ပြီး အသက်ဝင်မည်ဖြစ်သည်။ တရားဝင် အသက်ဝင်သည့်နေ့မှ စပြီး Waso Learn ၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆက်လက်အသုံးပြုပါက ထိုပြောင်းလဲချက်များကို သဘောတူသည်ဟု သတ်မှတ်သည်။
Waso Learn ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ Waso Learn ၏ Official Facebook Page မှဖြစ်ပြီး info@wasolearn.com မှတစ်ဆင့်လည်း ဆက်သွယ်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။
Waso Learn App ကို အသုံးပြုရာတွင် အသုံးပြုသူ၏ ဖုန်းနံပါတ်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ အမည် နှင့် မွေးသက္ကရာဇ် ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို App အတွင်းဖြည့်သွင်းရန် တောင်းခံထားပါသည်။ ထိုအချက်အလက်များကို Waso Learn အသုံးပြုသူများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် နှင့် Strategy First Education Group (SFEG) အောက်ရှိလုပ်ငန်းခွဲများအားလုံးတွင် မျှဝေသုံးစွဲသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ Strategy First Education Group (SFEG) မှလွဲ၍ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများသို့ အသုံးပြုသူ၏ အချက်အလက်များကို မျှဝေသုံးစွဲသွားမည်မဟုတ်ပါ။
Waso Learn Website
No. 9A, Baho Road,San Chaung Township, Yangon.
09 – 266805001 ~ 5004